Hey'adda dugsiyada ee habka waxbaridda gaarka ah (SPSM) waxaa ay ka shaqeysaa in canugga, dhalinyarada iyo qofka weynba iyadoon loo eegeyn karaankooda maskax ahaaneed, ay helaan duruufo u saamaxaya in ay gaaraan hadafka waxbarashadooda.
Taas waxaannu sameyneynaa annagoo mareyna:
wax ku dhigid dugsiyo gaar ah
qalab waxbarasho oo la heli karo
Kaalmo dhaqaale oo xagga dowladda ah.
Waannu ognahay natiijooyinka la xiriira habka waxbaridda ee naafanimada kala duwani ay lahaan karto. Taageerada aannu soo bandhigeyno waxa ay khusayn kartaa waxbarashada qofka, shaqada barayaasha ama hawl iyo urur.
Dhammaan xaqbaa loo leeyahay waxbarasho shaqeyneysa, iyadoo aan la eegeyn karaan waxqabad. Si taas loo bixiyo waxaa loo baahanyahay aqoon iyo awood xirfadeed oo ku aaddan dugsiyada xannaanada iyo barbaarinta carruurta, dugsiyada iyo waxbarashada dadka waaweyn.
Awooddaas xirfadeed ee aannu siineyno waxaa ay dhammeystireysaa kheyraadka la xiriira habka waxbaridda gaarka ah ee yaalla degmooyinka iyo hawlaha waxqabadka ee xurta ah.
Cilmi baaris iyo iskaashi ku aaddan habka waxbaridda gaarka ah
Waxaannu ka shaqeyneynaa in cilmi baarista iyo hawlaha dhabta ay isu soo dhawaadaan. Taasi waxaa ay ku imaaneysaa siyaabo ay ka mid tahay iyadoo cilmi baarista la xiriirta habka waxbaridda gaarka ah lagu faafinayo shirar, siminaarro, baro intarneed oo kala duwan iyo wargeyskeenna Lika värde.
Waxaan xitaa shabakad iskaashi iyo wadashaqeyn kula sameyneynaa jaamacadaha xagga waxbarashada iyo koorsooyinka.
Iskaashiga Midawga yurub waxaa uu imaanayaa iyadoo la marayo hawsheenna ku aaddan European Agency for Special Needs and Inclusive Education Xiriirrada caalamigaa, waxyaabo ay ka mid yihiin sii maridda shabakad xagga eeriyadeenna awoodda xirfadeed, micno weyn ayey leedahay. Gaar ahaan meelo si dhif ah ay uga timaado naafanimadu.
Iskaashiga lala leeyahay Hey'adda dugsiyada iyo Hey'adda kormeerka dugsiyada waxaa uu u dhacayaa si joogto ah.